ဟာဝိုင်ယီ Photoreal Vol 1 + Vol2+ Vol3DOWNLOAD FSX & P3D - Rikoooo
အရွယ် 5.77 GB ကို
downloads ရယူရန္ 107 334
Author: လေယာဉ် Sim Jewel, ဂျော့ခ်ျ Keogh, Ray Taburet, ချားလ်စ် Reid
ပြောင်းလဲမှုမှတ်တမ်း 30 / 04 / 2019 အပေါ်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်:
- ဝက်ဘ်ဆိုက်အဆိုအရ Latest updates https://hawaii-photoreal.com
- Added Auto-gens "ဟာဝိုင်ယီ Autogen သဘာဝပေါက်ပင် BETA" နှင့် "ဟာဝိုင်ယီကျွန်းအပိုမာတိကာ"
23 / 10 / 2017 အပေါ်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်:
- auto-installer ကိုဗားရှင်း 11 မှ updated
- PHBK န်းကျင်တစ်ဦးရေအပေါက် bug ကို Fixed
- ရှိလားတွင် Sands လေဆိပ်
- JHM Kapalua လေဆိပ် (ဟာဝယေံလေဆိပ်) နှင့်ချားလ်စ် Reid's Auto-gen အကြားတစ်ဦး Compatibility ကို bug ကို Fixed ။
- v0.95 ဖို့ "အဆိုပါ Big Island တွင်" ဒိတ်လုပ်ပါ။ v0.97 ဖို့ "Maui တွင်" ဒိတ်လုပ်ပါ။
11 / 12 / 2015 အပေါ်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်:
- အောက်ပါ add-ons တွေကို Added: ဟာဝယေံလေဆိပ်အပိုင်း 1, အပိုင်း 2, (ဂျော့ခ်ျ Keogh ဖြင့်ဖြစ်စေ) အပိုင်း 3, ဟာဝိုင်ယီ 10m (ချားလ်စ် Reid ဖြင့်ဖြစ်စေ) Landclass (Ray Taburet ဖြင့်ဖြစ်စေ) mesh ။
- PHMK လေဆိပ် Molokai, Lanai စီးတီး PHNY, PHHN Hana, Kalaupapa PHLU, JHM Mauai အနောက်, PHJR ယောဟနျသရော့ဂျာဖျော်ဖြေမှု, PHBK ရှိလား Sands သည် NPS Ford ကားကျွန်း PHNG Kaneohe ဂလားပင်လယ်အော်, Princeville, ဆိပ်ကမ်း Allen က, Waimea နှင့် Upolu အသစ်ပြောင်းခြင်း။
- အဆိုပါ update ကိုအဆောက်အဦးများ, သီချင်းများ, အသွားအလာ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်, လူတွေ, ကုန်တင်ကား, Photo-အစစ်အမှန်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, ကာတွန်းအရာဝတ္ထု, taxiways ညဉ့်အခါဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ပိုပြီးပါဝင်သည်!
- အောက်ပါကျွန်းများ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်း: Niihau v.1.0, Oahu တွင် v.0.97, v.1.0 Kahoolawe, Lanai v.1.0, v.0.95 Maui တွင်, Molokai v.0.99, Molokini v.1.0 က The Big Island တွင် v.0.93 ။
- 6.17 GB ကိုတယောက် volume အထဲသို့သုံး volumes ကိုပေါင်းခြင်း။
- Installer ဗားရှင်း 10
ဤတွင်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာအလှတစ်ခုပြီးပြည့်စုံသောဓာတ်ပုံကိုမှန်ကန်ရှုခင်းပါ! ဤသည်ဟာဝိုင်ယီကျွန်းအုပ်စုတွင် (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု) ၏ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကျိကျိတက်ဗူးကျွန်းအပါအဝင်သုံးသီးခြား volumes ကိုလည်းပါဝင်သည် Niihau v.0.99, Oahu တွင် v.0.99, Kahoolawe v.0.99, Lanai v.0.99, Maui တွင် v.0.99, Molokai v.0.99, Molokini v.0.99 က The Big Island တွင် v.0.97။ ဖွငျ့ လေယာဉ် Sim Jewel အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ။
အားလုံးအမှန်တကယ်ဓာတ်ပုံဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ Auto-gen နှင့်ညဉ့် texture (Molokai မှလွဲ. ) နဲ့ 1m / pixel ရှိပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, အပိုငျးအဖယ်ရှားခြင်း, ကမ်းရိုးတန်း clipping ရုံဓာတ်ပုံ-အစစ်အမှန်ရှုခင်းသည်မဟုတ်, ဆုံးအရောင် / သေံဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အခြားသောအရာများတို့သည်ယခုရှုခင်းအလွန်လှပသောပါစေ။
ဒါ့အပြင် "ဟာဝယေံလေဆိပ်" add-ons တွေကိုဂျော့ခ်ျ Keogh နှင့် "ဟာဝိုင်ယီ Autogen သဘာဝပေါက်ပင် BETA" နှင့် "ဟာဝိုင်ယီကျွန်းအပိုမာတိကာ" အသုံးပြုပုံပါဝင်သည်
သငျသညျကိုလည်းရနိုင် PLUS ဤနေရာတွင်ဗားရှင်း: https://hawaii-photoreal.com/plus-version/
1 ဤသည်ကို download အလွန်လေးလံသောဖြစ်ပါသည် 5.77 GB ကို သင်တစ်ဦးမဟုတ်လျှင် ဂျမ်ဘို အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကို download အချိန်များစွာကိုနာရီစောင့်ဆိုင်းရန်မျှော်လင့်ထား။ ဒါကရှုခင်း 8 အစိတ်အပိုင်းများကိုခွဲခြားခဲ့သည်။ ၏ကို download ပြီးနောက် ဖိုင်တွဲတစ်ခုသို့အရာအားလုံးကိုဇီပ်နှင့်အော်တို installation ကိုစတင်ရန် hawaii_photoreal_vol_1_vol_2_vol_3.exe ကို click hawaii_photoreal_vol_1_vol_2_vol_3.zip.
2 သငျသညျဂျမ်ဘိုအဖွဲ့ဝင်သို့မဟုတ်မဟုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်, ကဤကဲ့သို့သောကြီးမားသောဖိုင်များကို download လုပ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် သင့်ရဲ့ default အနေနဲ့က Internet Explorer သို့မဟုတ် Google Chrome ကိုသို့မဟုတ် Firefox browser ကိုထက်အခြားတစ်ဦးကို download manager ကိုသုံးစွဲဖို့အကြံပြုခဲ့သည်။ Rikoooo Highly သင်ဤစာရင်းထဲတွင်မရရှိနိုင်ပါဦးတည်းဆော့ဖျဝဲအကြံပြု: http://www.techsupportalert.com/best-free-download-manager.htm
3 ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ Simulator ကိုအတွက်လက်ဆောင်မပေးမယ့်လျှင်ရှုခင်းကို install ပြီးနောက်အလိုအလျောက် installer ကို scenery.cfg ဖိုင်ကနေ Simulator ကိုအတွက်ရှုခင်းကိုသက်ဝင်နိုင်မဟုတျကွောငျးကိုဆိုလိုသည်။ ဤပြဿနာကိုအဓိကအကြောင်းပြချက်ကတော့ Windows ခွင့်ပြုချက်ဖြစ်ပါသည်, အကယ်စင်စစ်အချို့ကိစ္စများတွင်, Window အတွက် scenery.cfg file ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်အလိုအလျှောက် installer ကိုမှခွင့်ပြုချက်ပေးဖို့ငြင်းဆန်။ သငျသညျဤကိစ္စတွင်မှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သင်၏ Windows အသုံးပြုသူအကောင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွင့်ပြုချက် (စုစုပေါင်းခွင့်ပြုချက်) ရှိပြီးသေချာပါစေ။
အဆိုပါ Big Island တွင် (Kona code ကို ICAO: PHKO)
ဟာဝိုင်ယီကိုလည်းပြည်နယ်နှင့်အတူစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုရှောင်ရှားဖို့ Big Island တွင်အဖြစ်လူသိများသည်။ အဆိုပါကျွန်းဆဲကြီးထွားလာနှင့်ကျွန်းဖွဲ့စည်းဤသို့တစ်ပြိုင်နက်တည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးသော5မီးတောင်ပါဝင်သည်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်းဤမီးတောင်၏အနည်းငယ်ဆဲတက်ကြွနေကြသည်။ ဤသူမီးတောင်မှလာသောချြောပင်လယ်ထဲသို့စီးဆင်းနှင့်အသစ်မြေယာဖန်တီးပေးပါတယ်။
Maui (Code ကို ICAO PHOG):
Maui တွင်ဟာဝိုင်ယီ၏ဒုတိယအကြီးဆုံးကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကျွန်းမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သည်။ ထိုကြောင့်, ကအတော်လေးဒါပမေဲ့အံ့သွ shaped ဖြစ်ပါတယ်။ Maui တွင်သဘာဝချစ်သူများအကြားအလွန်ရေပန်းစားသည်။ ကျွန်းကနေ, သင် humpback ဝေလငါးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်သို့မဟုတ်တစ်ခုအံ့သြလှပသောရေအောက်ကမ်ဘာပျေါတှငျရေငုပ်သို့မဟုတ် snorkeling သွားပါ။ အများအပြားကကောင်းတဲ့အဟောင်းကိုကျေးရွာများအဖြစ်ကောင်းစွာကျွန်းပေါ်တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ Lahaina ၏သမိုင်းဝင်မြို့သွားရောက်လည်ပတ်ကောင်းစွာကျိုးနပ်သည်။
ကိုယ့်ဟာဝိုင်ယီ Maui တွင်၏ကျန်ကဲ့သို့သောအပူပိုင်းရာသီဥတုရှိပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တောင်များ၏ရှေ့မှောက်တွင်၏, မိုးရွာသွန်းမှုကိန်းဂဏန်းများအတွက်ကြီးမားတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်ဖြစ်နိုင်သည်။ Maui တွင်၏အနောက်ဘက်အစိတ်အပိုင်း leeward ဘက်မှာတည်ရှိပါတယ်နှင့်မျှမျှတတခွောကျသှေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသိပ်များတွင်ဖြစ်ပါတယ်တောင်တို့ထံမှအရှေ့။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်တောင်ပုံသဏ္ဍာန်၏, Maui တွင်, ဒါခေါ် Maui တွင်ရေဝဲပေါ်မှာထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းမရှိ။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုလေတောင်ပေါ်မှာHalaekalã၏မြောက်ပိုင်းတောင်စောင်းတစ်လျှောက်တွင်အတင်းအကျပ်ခံရဖို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤတောင်၏အနောက်ဘက်အခြမ်းတွင်ပြုလုပ် Maui တွင်အတူတိုက်မိခြင်းနှင့်တောင်ဘက်အတင်းအဓမ္မဖြစ်ပါတယ်။ လေတိုက်လျှင်မြန်စွာတိုးမြှင့်တစ်ဦးချိုင့်ဝှမ်းလေတိုက်နှုန်းမှတဆင့်အတင်းအဓမ္မဖြစ်ပါတယ်လို့ပဲ။ အဆိုပါထိပ်သီးအစည်းအဝေးကနေအောက်ဖက်လေညင်းမိုးရေချိန်ကဒီမှာဆန်းသည်အဘယ်ကြောင့်ရှင်းပြသောမိုဃ်းတိမ်ကိုစီးထွက်သုတ်။
MOLOKAI (Code ကို ICAO PHMK):
Molokai အရှိဆုံးငြိမ်းချမ်းသောကျွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သောကြောင့်၎င်း၏ capricious ပုံစံကိုနှင့်ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်တွင်မြင့်မားသောကမ်းပါး၏ကျွန်းတစ်ဇိမ်ခံကမ်းခြေနေရာတခုအဖြစ်အလွန်သင့်လျော်သည်မဟုတ်။ သို့သော်ကျွန်းဒီကျွန်းစု၏ဆုံးစစ်မှန်နှင့်အညစ်အကြေးကျွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Molokai အပူပိုင်းရာသီဥတုရှိပါတယ်။ လေတိုက်အမြဲအတူတူဦးတည်ချက်ကိုမှလာကဲ့သို့တောင်တို့ဤအရပ်ဤအရပ်၌မရှိ leeward သို့မဟုတ် windward ဘက်, orographic မိုးရွာသွန်းမှုမရှိခြင်းရှိသည်။ မိုးရေချိန်ပိုပြီးအညီအမျှကျွန်းကိုကျော်ထွက်ပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ အများစုမှာမိုးရွာရွာဆောင်းတွင်းကာလအတွင်းကျရောက်ပါတယ်။ နွေရာသီပင်အလွန်အမင်းခြောက်သွေ့သောဖြစ်နိုင်ပါသည်။
LANAI: (Code ကို ICAO PHNY)
Lanai အားလုံးတစ်နှစ်ပတ်လုံးက၎င်း၏နိမ့်မိုးရွာသွန်းမှုနှင့်သာယာသောအပူချိန်အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဟာအပူပိုင်းရာသီဥတုနှင့်အတူတစ်ဦးကျောက်တောင်ကျွန်းဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းကျွန်းဒီနေ့ခေတ်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးနာနတ်သီးစိုက်ခင်းကဒီမှာတွေ့နိုင်ပါသည်, အများပြည်သူမှပိတ်ပစ်ခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုလည်းလှည့်ခရီးသည်များကျွန်းသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးတည်းသာမြို့ကျွန်းပေါ်တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်: အမှန်တကယ်ဟိုတယ်နှင့်အတူငယ်တစ်ခုအခြေချဖြစ်သော Lanai စီးတီး။
Kahoolawe အလွန်ခြောက်သွေ့တဲ့ကျွန်းဖြစ်ပါတယ်။ သောကြောင့်လတ်ဆတ်တဲ့သောက်သုံးရေမရှိခြင်း, အဲဒါကိုအမြဲကျဲပါးလူနေထူထပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်းစဉ်အတွင်းကျွန်းအများအပြားရည်ရွယ်ချက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာယောက်ျားရဲ့ပြစ်မှုဆိုင်ရာကိုလိုနီဖြစ်ခဲ့သည်, တကကျွဲနွားမွေးမြူရေးခြံအဖြစ်နှင့်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ရေးခိုင်ခိုင်လုံလုံအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ်ကျွန်းတစ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် site ကိုဖြစ်ပါတယ်။
Kahoolawe အလွန်အမင်းနိမ့်မိုးရွာသွန်းမှုကိန်းဂဏန်းများနှင့်အတူအပူပိုင်းရာသီဥတုရှိပါတယ်။ ထိုသို့Haleakalãမီးတောင်၏ leeward ဘက်မှာတည်ရှိပြီးနှင့်သာကမ်းရိုးတန်းဒေသများအချို့မိုးရွာသွန်းမှုရသည်ကို ထောက်. ဤသည်ဖြစ်ပါတယ်။
ကနေပုံများ Prepar3D v2.3
OFX အမေရိကန်နိုင်ငံ, Mega mesh FSX & P3D